४ नम्बरमा नियमापत्ती….नियमापत्ती, सभामुख जिल्ल ! — samadhannews.com
४ नम्बरमा नियमापत्ती….नियमापत्ती, सभामुख जिल्ल !
पोखरा, १२ बैशाख:
प्रदेश ४ को ससंदमा नियमापत्ति हुँदा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी नै जिल्लपरे । प्रदेश सभाको क्षेत्राधिकार बाहिर गएर बोलेको भन्दै मंगलबार संसदमा २ पटक नियमापत्ति भयो ।
तर, सभामुख अधिकारीले न नियमापत्तिको कारण सोधे न कुनै रुलिङ नै गरे । नियमापत्ति गर्दै सांसदले जवाफ तथा माफी माग्न लगाउँदा सभामुख नै अलमलिए उनले नियमापत्तिप्रति कुनै सम्बोधन नै नगरी अगाडि बढे । प्रदेश ४ को संसदमा पहिलो पटक नियमापत्ति भएको हो ।
विशेष सयमा स्याङ्जाका सांसद मेषलाल श्रेष्ठले लेनिन दिवसका अवसरमा एमाले–माओवादीले आइतबार काठमाडौंमा गरेको संयुक्त कार्यक्रम लक्षित गर्दै आक्रोशित बने ।
‘कार्यक्रममा भनियो हामीलाई राष्ट्रियता चाहिँदैन तर हामीलाई महान नेताको फोटो चाहिन्छ । फोटो नहुँदासम्म सभा सञ्चालन हुन सक्दैन भनेर ४ घन्टापछि २ जना महाराजहरुको, नेताहरुको फोटो अगाडि राख्न लगाइयो । यही हो राष्ट्रियता ?’ श्रेष्ठले भने ।विशेष समयमा बोल्दैश्रेष्ठले अरु थपे, ‘यो सब देखेर मेरो विश्वास टुट्यो, म अधैर्य भएँ, मलाई अचम्म लाग्यो । नेताहरुले को छ भगवान भने । हाम्रो त उहाँहरु नै हो भगवान भने । यही हो राष्ट्रियता ?’ सांसद श्रेष्ठले एमाले–माओवादीका कार्यकर्तालाई अराजक तत्व भएकोसमेत अरोप लगाए ।
प्रदेश सभाको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर बोलेको भन्दै माओवादी सांसद दीपक कोइरालाले नियमापत्ति गरे । पार्टीको कार्यक्रममा भाषण गरेको कुरालाई अनावश्यक रुपमा संसद ल्याउन नहुने जिकीर उनको थियो ।
कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्ना गुरुहरुको फोटो राख्ने कुरालाई राष्ट्रियतासँग गाँस्ने कुरा गम्भीर आपत्तिजनक छ । सदनमा यस कुराको जवाफ दिनुपर्‍यो,’ कोइरालाले भने, ‘पार्टीका कार्यकर्ताले बोलेका कुरालाई अराजकसमेत तत्वका रुपमा सम्मानित सदनमा उठाउनुभयो । मेरो नियमापत्ति छ, उहाँले जवाफ दिनुपर्छ ।
कास्कीका एमाले सांसद राजीव पहारीले त्यसमा थप्दै श्रेष्ठले संसदमा माफी माग्नुपर्ने माग गरे । सांसद पहारीले थपे, ‘संसदमा के कुरा बोल्ने के कुरा नबोल्ने ख्याल नगर्नु लोकतन्त्रमाथिकै अपमान हो । यहाँले यही बैठकमा माफी माग्नुपर्छ ।’
सांसद कोइराला र पहारीले नियमापत्ति गर्दै जवाफ तथा माफी माग्नुपर्ने सभामुखसँग माग गरे । तर, त्यसको वास्ता नगरी सभामुख अधिकारीले अर्को कार्यसूचीमा प्रवेश गरे ।
संसदमा शून्य तथा विशेष समयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्साललाई सभामुखले समय दिए । मन्त्री लम्सालले शून्य तथा विशेष समयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुअघि नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदले राखेका भनाइमा केन्द्रित रहे । नीति तथा कार्यक्रमको अध्ययन गरेरमात्रै आलोचना गर्न मन्त्री लम्सालले आग्रह गर्दैगर्दा कांग्रेस सांसद कुमार खड्काले नियमापत्ति जनाए ।
‘शून्य तथा विशेष समयमा उठेका प्रश्नको मात्र जवाफ दिन अनुमति भएकोमासंसदबाट पारित भइसकेको नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित भएका कारण नियमापत्ति छ,’ सांसद खड्काले भने, ‘विषयमै केन्द्रित गराइदिनु हुन सभामुखज्यूलाई अनुरोध गर्दछु ।’ खड्काको नियमापत्तिपछि पनि सभामुखले कुनै सम्बोधन र रुलिङ नै गरेनन् । सभामुख चुप रहेपछि मन्त्री लम्सालले प्रश्नको जवाफ दिन थाले ।
प्रदेश सभा सञ्चालन नियामलीको दफा २५ मा नियमापत्ति सम्बन्धी व्यवस्था छ। बैठकसमक्ष तत्काल विचाराधीन रहेको विषयमा कुनै सदस्यलाई नियम उल्लंघन भएको छ भन्ने लागेमा जुन नियम उल्लंघन भएको हो सो खुलाई नियमापत्ति उठाउन सक्ने व्यवस्था छ ।
नियमापत्ति उठाउने सदस्यले सभामुखबाट स्वीकृति सूचक अभिव्यक्ति वा इशारा पाएपछि बोलिरहेको सदस्यले बोल्न बन्द गर्नु पर्नेछ । तर, मंगलबारको संसद बैठकमा सभामुखले कुनै इसारा गरे न सांसदले बोल्न नै बन्द गरे ।
नियमापत्ति उठाउने सदस्यले आफ्नो कुरा र आधार स्पष्ट गरी नियमापत्ति सम्बन्धी कुरा मात्र बोल्न पाउनेछन् । बोलिसकेपछि निजले आफ्नो स्थान ग्रहण गर्नु पर्नेछ । बैठकमा उठाइएको नियमापत्तिको निर्णय सभामुखले गर्नेछ र सो निर्णय अन्तिम हुनेछ । तर, सभामुख अधिकारीले त्यसतर्फ कुनै संकेत नै नगरी अरु कार्यसूचीमा प्रवेश गरे । समितिको मंगलबारको संसद बैठकमा विभिन्न सांसदले शून्य तथा विशेष समयमा बालेका थिए ।
समितिको म्याद थपियो
बैठकमा प्रदेशको राजधानी तथा नामकरण सम्बन्धी सुझाव पेस गर्ने मिति १० दिनका लागि थप भएको छ । प्रदेशको राजधानी तथा नामाकरण सम्बन्धी गठित सुझाव समितिका सभापति विन्दुकुमार थापाले १० दिन समय थप गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले स्थानीय तहको सभा सञ्चालन कार्यविधि छलफलका लागि प्रस्ताव गरे ।
बजेट ल्याउन बुँदा निलम्बन
प्रदेश सरकारले १४ गते बजेट ल्याउने तयारी गर्दै थियो । बजेट कस्तो कस्तो बनाउने भनेर कम्तीमा १५ दिनअघि बजेट पूर्व छलफल गरेर सांसदको राय लिनुपर्ने प्रदेश सभा नियमावलीमा प्रावधान छ । बजेट पूर्व छलफल भएको १५ दिनपछि मात्र अर्थमन्त्रीले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ । तर, त्यसो नगरीसरकारले बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेपछि प्रतिपक्ष दल कांग्रेसको विरोध गरेको छ ।
मंगलबार बसेको कार्यव्यवस्था मरामर्श समितिमा कम्तीमा १५ दिनअगावै प्रि बजेट छलफल गर्नुपर्ने प्रावधान भएको बुँदा निलम्बन गरेर १४ गते नै बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यो प्रस्ताव कानुनसंगत नभएको भन्दैकांग्रेसले असहमति जनायो । पूरक बजेट भएकाले यसपटकलाई बुँदा निलम्बन गर्ने तर १३ गते सांसदको राय लिएर १९ गतेमात्र बजेट प्रस्तुत गर्ने गरी कांग्रेस सहमत भएको छ । १५ दिनअघि प्रि बजेट छलफल गर्ने प्रावधानलाई ७ दिनमा झार्ने परामर्श समितिमा सहमति भएको छ ।
१३ गते अर्थमन्त्री किरण गुरुङले करको सिद्धान्तबाहेक वक्तव्यसहित रायका लागि संसदमा पेस गर्ने र १९ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी भएको कार्यव्यवस्था समिति सदस्य कुमार खड्काले जानकारी दिए ।
कार्यव्यवस्था समितिमा कांग्रेसलाई थाहै नदिइ फास्टट्राकबाट १४ गतै बजेट प्रस्तुत गर्ने भनेर टुंग्यो लागिसकेपछि कांग्रेसले त्यसको विरोध गर्नुपरेको १ सांसदले बताए ।